Thai Nepal News:: कस्को काम हाईलाइटमा ‘मजदुरवाला बालबालिका कि तरकारीवाली कुसुम’ ?
वास्तवमा काम कुनै सानो ठुलो हुँदैन, कामको बारेमा सोच्ने सोचाई फरक हुन सक्छ । म कुरा गर्न खोज्दैछु इन्टरनेटबाट अहिले भाइरल भएकी तरकारीवाली ‘कुसुम श्रेष्ठ’को । साँच्चै नै उनि अहिले छाएकी छिन् विश्वभर इन्टरनेटको मध्यमबाट । किन भईन् त उनि यति व्यापक ? के तरकारी बेच्नु उनको ब्यापकता हुनुको मुख्य कारण हो ? कि उनको सुन्दरता हो त ? अथवा अरु केही हुन सक्छ कि ?
उनीलाई इन्टरनेटको मध्यमबाट प्रख्यात गराउँने पत्रकार रुपचन्द्र महर्जनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कलिलो उमेरमा पढ्न छोडेर, मजदुरी गर्न बाध्य नेपाली बालबालिकालाई पनि हाईलाइटमा ल्याउन मदत गर्नुहुन्छ कि ? नेपालका साथै विश्वभर मजदुर दिवस मनाइन्छ । तर नेपालमा रहेका १६ लाख बालमजदुरलाई मजदुर दिवसले खासै छोएको पाइन्न । तीमध्ये ६ लाख २१ हजार बालबालिका बालमजदुरका रुपमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहँदै आएका छन् । यिनीहरुको पक्षमा बोल्ने न कोही मजदुर नेता छन्, न त बालमजदुरका मुद्दा नै उठान्छ । भएका पत्रकारहरुलाई पनि अन्य काम मै भ्याई नभ्याई छन् । ति बालबालिकाहरूका अगाडी त तरकारी बेच्ने काम न कुनै जोखिमपूर्ण नै हो, न कुनै अनौठो नै । सुन्दरताको हिसाबले उनीलाई हाईलाइटमा ल्याइएको हो भने मिस नेपाल जस्ता ब्युटी कनटेक्सहरुमा ल्याउँन सकिन्थ्यो नि हैन र ?
हुन त उनलाई हाईलाइटमा ल्याएर एक किसिमको राम्रो काम पनि भएको छ । बिस्तारै पछि पर्दै गएको नेपाल, अचानक विश्वभर छाएको छ, मात्र एउटा केटिका कारणले । अनि अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको कुसुम जस्ता हजारौँ युवायुवतीहरुलाई आफ्नै ठाउँमा सहि तरिकाले गरेमा जस्तो राम्रो काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने प्रेरणा मिलेको छ । तर तरकारी बेचेर भएनी उनीले पढ्न त पाएकी छिन् नि, बिहान बेलुका छाक टार्न पक्कै गारो छैन होला उनीलाई त । किनभने कृषिप्रधान देशमा कृषि ब्यबसाय गरेर खाने मान्छे कहिल्यै भोकै मर्दैन । तर सोच ति अनाथ, अपाङ्ग अनि मजदुर गर्न बाध्य बालबालिका जसले अर्काको गुलामी नगर्दा छाक टार्न गाह्रो हुन्छ, भोकै पेट सुत्न पर्ने अवस्था आउँछ । जसकालागि पढ्ने, स्कुल जाने, राम्रा लुगा लगाउने कुरा त सपना जस्तै हुन् । यो अवस्थामा कसलाई प्राथमिकतामा ल्याउनु पर्थ्यो होला त ?
सुन्नमा आएको छ कुसुम त अब नायिका हुने भईन रे । लजालु स्वभाबकि उनि अब कुर्ता सुरुवालमा भन्दा बेग्लै रुपमा देखिने भईन । खुसि लागेको छ सानै उमेरमा यति माथि पुग्न सफल भईन तर उनीले छोटो समय मै पाएको यो सफलता दिर्घकालसम्म हुन्छ कि हुँदैन त ? त्यो त समयले नै बताउला । अवसरको खोजि सबैलाई हुन्छ, यहाँ पनि रामचन्द्र महर्जनले उनीलाई एउटा अवसर प्रदान गरेका छन् । कुसुमको फोटो इन्टरनेटको मध्यमबाट विश्वभर चिनाउँनलाई, उनको यो कामलाई सम्मान गर्छु । यसरी नै अन्य अवसरहरु पनि ईटा बोकी, घाँस दाउरा गरि, होटलमा भाडा माजी जीवन चलाउँने ति सबै कुसुमहरुले पाएमा कति जाति हुनेथ्यो ।
मैले न कुसुमको आलोचना गरेकी हुँ, न त उनलाई शिखरमा पुर्याउन मदत गर्नेको नै । मैले मात्र प्राथमिकता र अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई चाहिएको बिषयबस्तुका बारेमा प्रस्ट्याउँन मात्र खोजेकी हुँ । कसैलाई असर पुर्याउने मेरो धारण होइन, कसैलार्इ मेरो बिचारले ठेस पुर्याएमा क्षमाप्राथी छु ।
यिनी हुन् ‘डोकोवाली’
यिनी हुन् ‘गिटी कुट्नेवाली’
यिनी हुन् ‘होटलमा भाडामज्नेवाली’
यिनी हुन् ‘ईटावाली’
र यिनी हून् ‘तरकारीवाली’